Dukaan 27.5 "badhtanka wadista ebike ee qiimaha ugu fiican | ebike Shuangye
Bogga ugu weyn Products Baaskiilada korantada ugu fiican 27.5 ″ dhexda wadista ebike 350w bafang motor A6AH26MD
Mashiinka: 36V 250W / 350W bartamaha gawaarida gawaarida
Batariga: 36V 10Ah / 13Ah baytariga lithium ee laga saari karo
Xawaaraha Heerka: 25-30km / h
Max Range: 25km / h-30km / saacaddiiba
Taayir: 26 "* 1.95 / 27.5" * 1.95
Load Max: 100-120kgs
Qalabka: 7 xawaare
Muuji: Maaraynta Maareynta Maareynta Maaraynta
Iftiin hore: 3W iftiin hore oo iftiimin leh dekedda USB
Details Product faahfaahinta
27.5 ″ dhexda wadista ebike 350w bafang motor
Tani bartamaha wadista ebike waxaa lagu qalabeeyay mootada bafang mid wadata. Qeybinta miisaanka wanaagsan iyo xiriirka dhulka ka wanaagsan, baaskiil koronto ku socda oo la socda mashiinka dhexe ee wadista Bafang kaliya maahan wax dabiici ah, laakiin sidoo kale si gaar ah ayaa loo nabdoon yahay. Waxayna si gaar ah ugu habboon tahay isticmaalka maalin kasta magaalada iyo hareeraheeda. Waxaa jira 250w ama 350w matoor ayaa la dooran karaa, waxay kaa dhigayaan inaad baaskiil wadid wadada xawaare dhan 25km / h celcelis magaalada ah. Sidaa darteed, bartamaha wadista ebike waxay la tacaali kartaa baahida loo qabo baaskiil wadista meelaha buuraha leh.
Ku kala duwan mashiinka hub, mootada 350w ee dirf bafang ayaan lagu dhisin giraangirta, laakiin badanaa waxaa lagu dhajiyaa meel u dhow salka mootada. Sidaas awgeed riixitaanka waxaa lagu bixiyaa baallooyinka halkii laga siin lahaa giraangirta, iyadoo ugu dambeyntii lagu dabaqo gawaarida iyadoo loo marayo tareenka wadista mootada. Sababtoo ah awoodda waxaa lagu adeegsadaa silsiladda iyo jeexjeexa, baaskiil wadista korantada ayaa adeegsata 250 watt ama 350 watt awood matoor ah, taas oo si fiican uga ilaalin karta xirashada dhaqsaha badan ee gaariga.
Ku qalabaysan mashiinka wadista bafang LCD bandhig iyo walxo kontorool saddex-badhan ah. Gudiga bandhiga balaaran wuxuu ka warbixinayaa dhamaan macluumaadka wadida muhiimka ah sida xawaaraha, heerka taageerada, masaafada wadista, xaalada batteriga iyo waqtiga. Badhamada kor iyo hoosba waxay hagaajin karaan Heerka Caawinta Pedal-Assist (laga bilaabo 0 illaa 5). Iftiinka hore waa la shidi karaa habeenkii ama cimilada xun.
Bateriga laga saari karo
Midkan 'midke' wuxuu adeegsadaa nashqadeynta batteriga qarsoon kaas oo ku jira qolka baaskiilka, waxaana loo oggolaaday batari lithium 36V 10AH ah. Iyo qiiqa buuxa ee buuxa, bartamahan masaafada ebike ee masaafada wuxuu heli karaa 25-30 mayl oo hoos imanaya habka E-bike iyo 50-60 mayl oo hoos imanaya habka Pedal-Assisted. Isku dar laba nooc, kaa caawiya inaad baaskiil wadid si fudud ugaga dhaqso badan baaskiilka caadiga ah. Shaqadiisana laga saari karo waxay kugu kalifaysaa inaad batteriga si sahal ah uga soo saarto meel kasta oo ay saldhigyo ku jiraan. Waqtigeedana lacag bixinta waa 5-7 saacadood.
Si loo hubiyo in wadaha kasta uu leeyahay xaalad baaskiil oo raaxo leh oo nabadgelyo leh, waxaan u isticmaalnaa labo aluminium oo kabaal bir ah oo aluminium ah iyo nidaamka bareega mashiinka qalabka 'mashiinka' mashiinka 'mashiinka' mashiinka 'mashiinka' mashiinka 'mashiinka' mashiinka 'mashiinka' mashiinka 'mashiinka' mashiin kasta oo dhan 160. Labadooduba si fudud ayey u joojin karaan baaskiilka mootada hore ama gadaal gadaal si fudud markii uu fuushan yahay riixayo kabaalka aluminiumka.
7 qalab oo leh derauilleur
Si loola qabsado baahiyaha dadka kala duwan iyo kuwa ugu jecel, 7 derailleur xawaare ayaa loo adeegsaday ebike-kan. Waa isbeddelka qalabka duulimaadka si habsami leh oo fudud, dooro qalab sare ama qalab hooseeya waxay kuxirantahay sida aad u egtahay.
Iftiinka hore ee 3W oo iftiin leh oo iftiinka socodka ah habeenkii si loo hubiyo nabadgelyadaada fuushan, isla markaana lagu qalabeeyo dekedda taleefanka gacanta oo laga buuxiyo taleefankaaga oo leh awood batteri oo yar.
Haddii aad xiiseyneyso mootooyinka korontada bafang ee korantada, booqo baaskiilada korantada ee buurta, baaskiil koronto oo magaalada dhexdeeda ah, duufaanta korantada ee korantada, wadada ebike.
Tags:bartamaha wadista e baaskiil bafang e baaskiil
Ka hor: Baaskiilka buurta korantada ugu wanaagsan ee 36V batari lithium A6AH26
Next: Baaskiil koronto oo waddo cusub maraya A6-R oo leh taayirro 700 * 35C ah
mootada korontada baaskiilka wasakhda 26 ″*4.0 taayir baruur 48V 500W D1
Baaskiilka buurta korantada ugu wanaagsan ee 36V batari lithium A6AH26